प्रहरीले बुझायो प्रचण्ड जुत्ताकाण्डकाे प्रतिवेदन, तिरूवाकाे खुल्यो यस्तो रहस्य! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रहरीले बुझायो प्रचण्ड जुत्ताकाण्डकाे प्रतिवेदन, तिरूवाकाे खुल्यो यस्तो रहस्य!
काठमाडौं, २२ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गरेर जुत्ता प्र हार गर्ने युवा द्व न्द्वकालका सहिद परिवारका सदस्य रहेको खुलेको छ । प्रहरीले यस अघि उनी विप्लव समुहको कार्यकर्ता भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो । तर उनको वारेमा गरिएको अनुसन्धान पछि युवा सहिद परिवारकै भएको खुलेको हो ।
गत आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संवोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डलाई लक्षित गरेर एक युवाले जुत्ता प्र हार गरेका थिए । जुत्ता प्र हार गर्ने जुम्लाका २२ वर्षे युवा रतन तिरुवालाई प्रहरीले प क्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रचण्डलाई ताकेरै जुत्ता प्र हार गरेपछि उनलाई विप्लवका कार्यकर्ता भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
सो घ टना पछि प्रहरी अ प राध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० सहकुल थापाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान पछि उनको वास्तविकता खुलेको हो । टोलीले अनुसन्धान प्रतिवेदन महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई बुझाइसकेको छ ।
‘उनका बुवा माओवादी द्व न्द्व कालमा मा रि एको हुँदा उनी सहिद परिवारकै सदस्य रहेको पाइयो। उनका बुवा द्व न्द्व कालमा राज्यपक्षबाट मा रिएको पुष्टि भएको प्रहरीको भनाई छ । तिरुवा विप्लवका कार्यकर्ता भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको संंयोजक थापाले बताए । शहिद परिवारको योगदानका बावजुद पनि उनीहरुलाई उचित सम्मान नगरेको भन्दै युवाले आ क्रोश जनाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण यस वर्षको होली खेल्न नपाइने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले होली नखेल्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भा इर सबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भनि विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट समेत प्रतिक्रिया आएको भन्दै प्रशासनले होली नखेल्न तथा भिडभाडमा नजान, भेला, सभा, सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि महाबिर पुनले दिए यस्तो खुशीकाे खबर